Xaliimo yarey oo fariin u dirtay Xisbiyada Dalka kajira. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Xaliimo yarey oo fariin u dirtay Xisbiyada Dalka kajira.
by admin 22nd May 2019 030
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil (Xaliimo Yareey) oo ka jawaabeysay eedeynta loo jeediyay ayaa sheegtay in guddigooda uusan jirin faragelin uga imaaneysa dhinaca Madaxda Dowladda gaar ahan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Waxa ay sheegtay in sababta ay u dhex degan yihiin Villa Soomaaliya ay tahay arrimo dhinaca amniga ah oo ay imaan karaan Xisbiyada Siyaasadeed ee dalka,balse deganaanshaha Madaxtooyada aysan aheyn inay fargelin arrimaha doorashooyinka ku hayaan Madaxda ugu sareysa Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maxuu ka yiri Agaasimaha hay’adda socdaalka iyo jinsiyaddaha Soomaliya go’anka Dowlada Kenya.
Xukuumada Somaliya oo Jawaab dabacsan ka bixisey Go,aankii Dowlada Kenya ku xanibtay.
Dowladda Soomalia oo muddo 4 bilood kadib Xayiraaddii dhanka socdaalka aheyd ka qaaday Siyaasiga C/Raxmaan Cabdi Shakuur.
admin 15th April 2018 15th April 2018
Dhageyso: Mid kamid ah Shaqaalaha Gar-gaarka hey’adda ICRC oo lagu dilay Gobolka Gal-gaduud
Tifaftiraha K24 28th December 2016 28th December 2016
War cusub: Maxaadan ogeyn oo xalay ka dhacay magaalada baydhabo xili gacanta lagu dhigay dableey dil u geesatay…..
Tifaftiraha K24 2nd March 2017